အမျိုးသားဆိပ်ကမ်းမှာ Tanger ထွက်ပေါက်: စက်ရုံပြင်ပ Shopping Mall
အမျိုးသားဆိပ်ကမ်းမှာ Tanger ထွက်ပေါက်
by ရာခေလသည် Cooper က
မင်းသားဂျော့ခ်ျရဲ့ကောင်တီ, Maryland ထွက်ပေါက် Shopping Mall
Tanger ထွက်ပေါက်အမျိုးသားဆိပ်ကမ်းမင်းသားဂျော့ခ်ျရဲ့ကောင်တီပဲ 8 မိုင် Downtown ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေ MD အတွက်သမိုင်းဝင် Oxon ဟေးလ်စိုက်ခင်းများ၏ site ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည့်ထွက်ပေါက်စျေးဝယ်ကုန်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့်စတိုးဆိုင်များ Calvin Klein H & M, IZOD, Gap စက်ရုံ Store ကအမေရိကန်လင်းယုန် Outfitters, Tommy Hilfiger, Banana Republic စက်ရုံ Store မှာ, အိမ်ဖြူတော်က Black Market ကစက်ရုံပြင်ပ, Chico ရဲ့စက်ရုံပြင်ပ, ကိုလံဘီယာ, Brooks ညီအစ်ကိုများစက်ရုံ Store မှာ, Aeropostale, PS ပါဝင်သည်
Aeropostale, ဂျေသင်္ဘောသားစက်ရုံ Store မှာ, လဲ့ Creuset စက်ရုံပြင်ပအများအပြားကပိုသည်။
Tanger ထွက်ပေါက်အမျိုးသားဆိပ်ကမ်းဝါရှင်တန်ဒီစီ, မေရီလန်းပြည်နယ်နှင့်မြောက်ပိုင်းဗာဂျီးနီးယားနိုင်ငံ၏မြို့တော်နှင့်နေထိုင်သူများသွားရောက်လည်ပတ်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာခရီးသွားဧည့်နှစ်ဦးစလုံးကိုဆွဲဆောင်ဖို့ 2013 ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့။ အဆိုပါထွက်ပေါက်စင်တာအဆိုပါခရိုင်တွင်အကြီးဆုံးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းများတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်မေရီလန်းပြည်နယ်အဘို့နှစ်စဉ်ရောင်းအားအခွန်ဝင်ငွေအတွက်အပိုဆောင်း $ 6.5 သန်းဒေါ်လာကိုဖန်တီးရန်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
နေရပ်လိပ်စာ: 6800 Oxon ဟေးလ်လမ်း, အမျိုးသားဆိပ်ကမ်း, MD (301) 567-3880 ။ Tanger ထွက်ပေါက်အရှေ့မြောက်ဘက်အမျိုးသားဆိပ်ကမ်း၏တည်ရှိခြင်းနှင့်ထံမှအလွယ်တကူဖြစ်ကြ၏ Capital ကို Beltway ငါ-95, ငါသည်-495, I-295 နှင့် Woodrow Wilson တံတား။ မြေပုံနှင့်လမ်းညွှန်ချက်ကိုကြည့်ပါ။
Tanger စက်ရုံပြင်ပ Store မှာနာရီ
တနင်္လာနေ့ - စနေနေ့ 9:00 pm တွင်-9: 00 နာရီ
တနင်္ဂနွေ 11:00 pm တွင်-6: 00 နာရီ
အဆိုပါစျေးဝယ်စင်တာထမင်းစားခန်းတချို့အစာရှောင်ခြင်းအစာကိုရှေးခယျြစရာရှိပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ရွေးချယ်ရေးအတွက်, ဦး MGM ကာစီနို သို့မဟုတ်အမျိုးသားဆိပ်ကမ်း Waterfront ။
အမျိုးသားဆိပ်ကမ်း တစ်ဦးလောင်းကစားရုံ, ဒဏ်ငွေစားသောက်ဆိုင်များ, ထူးခြားတဲ့လက်လီ, ရုံးနှင့်အိမ်ရာများနှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဟိုတယ်အတော်များများလည်းပါဝင်သည်တစ်ဝန်ကြီးချုပ်ကမ်းနားရောထွေးသုံးစွဲလိုရာခရီးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဆိပ်ကမ်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပထမအဆင့်တွင်ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ကြွင်း, Swarovksi, တောင်မွန်းလက်အောက်တွင် Jos အဖြစ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များအပါအဝင် upscaling စျေးဝယ်ပါဝင်သည်။
တစ်ဦးကဘဏ်များ, Godiva Chocolatier, အမေရိက, နှင့်ပိုပြီး။ အမျိုးသားဆိပ်ကမ်းမှာစျေးဝယ်အကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ။
Tanger စက်ရုံစက်ရုံပြင်ပစင်တာများ, Inc အကြောင်း
Tanger စက်ရုံစက်ရုံပြင်ပစင်တာများ, Inc တစ်ထွက်ပေါက်စျေးဝယ်စင်တာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခေါင်းဆောင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Saks ပဉ္စမရိပ်သာလမ်း OFF 5th, Nike က, Gap, Brooks ညီအစ်ကိုတို့, Tommy Hilfiger, လက်အောက်တွင်ချပ်ဝတ်တန်ဆာများနှင့်အဖြစ်တစ်နိုင်ငံလုံးအသိအမှတ်ပြုအမှတ်တံဆိပ်အမည်နှင့်ဒီဇိုင်နာထွက်ပေါက်စတိုးဆိုင်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ် ဂျေလေယာဉ်အမှုထမ်း။ Tanger စက်ရုံစက်ရုံပြင်ပစင်တာများ, Inc လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဂရင်း, မြောက်ကာရိုလိုင်းနားအခြေစိုက်နေတဲ့လူသိရှင်ကြား-ကုန်သွယ် REIT ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ကမ်းခြေ-to-ကမ်းခြေ 22 ပြည်နယ်များအတွက် 34 upscaling ထွက်ပေါက်စျေးဝယ်စင်တာများတစ်အစုစုအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားရှိပါတယ်, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10.3 စုစုပေါင်း ထက်ပိုမို 370 ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့်ကုမ္ပဏီများက operated ဖြစ်ကြောင်း 2,100 ကျော်စတိုးဆိုင်များမှငှားရမ်းထားသန်းစတုရန်းပေ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, www.tangeroutlet.com သွားရောက်ကြည့်ရှု။
အဆိုပါ Peterson ကုမ္ပဏီများအကြောင်း
အဆိုပါ Peterson ကုမ္ပဏီဝါရှင်တန်ဒီစီဒေသအတွက်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကပိုင်အိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း 30 ကျော်အကြာ Milt Peterson ကတည်ထောင်, ကုမ္ပဏီ, အထင်ရှားဆုံးနှင့်အောင်မြင်သောရောထွေးသုံးစွဲအချို့ကိုဗာဂျီးနီးယား Gateway မှာ, အမျိုးသားဆိပ်ကမ်း, Downtown Silver, နွေဦး, Washingtonian စင်တာ, Fairfax ထောင့်အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းဗာဂျီးနီးယားနှင့်မေရီလန်းအတွက်လူနေအိမ်များနှင့်ရုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဖန်တီးထားပါတယ် တရားမျှတသောအေိုငျမြား, Burke ကရေးစင်တာနှင့်တိုင်ဆန် McLean ရုံး Park က။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, www.petersoncos.com သွားရောက်ကြည့်ရှု။
သမုဒ္ဒရာစီးတီး, MD မီးပန်း: သဲသောင်ပြင်အဖွဲ့၏ 2016 ပြက္ခဒိန်
ကင်းဘရစ်, မေရီလန်း - တစ်ဦးကဧည့်သည်ရဲ့လမ်းညွှန်
Merriweather Post ကို Pavilion (ကိုလံဘီယာ, MD အတွက်ဂီတပွဲ)
Germantown, MD အတွက် BlackRock Center မှာအခမဲ့နွေရာသီဖျော်ဖြေပွဲများ
ပဲရစ်မှာ Bastille နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသော: 2016 လမ်းညွှန်
ဧပြီလနှင့်မေလတွင်သွားရောက်ရန် 10 အကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ် Bluebell ဝုဒ်
Liberty ၏ရုပ်ထုလာရောက်လည်ပတ် 10 သိကောင်းစရာများ
တက္ကသိုလ်အိပ်ဆောင်အခန်း - UK ရှိနေပါမှတစ်ဦးကစျေးပေါ Charm Way ကို
Monteverde, ကော့စတာရီအတွက်လာရောက်လည်ပတ် Worth4စာဆိုင်များ
ဆန်းစစ်ခြင်း: ခရီးသွားများအတွက် Cabeau "ဒီ သာ. ကောင်း၏ Umbrella"
ကောလိပ်ဘောလုံး PLAYOFF - အမျိုးသားချန်ပီယံရှစ်
စိန့်လူးဝစ်အတွက် 48 နာရီ: အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောခရီးစဉ်
အရီဇိုးနားဂေးအိမ်ထောင်ရေး Allow ပါသလား?
တောင်အာဖရိကရဲ့ကိပ်အနောက်ကမ်းခြေပေါ်သလားဖို့ထိပ်တန်း7အရာ